150KW 188KVA ဒီဇယ် ဂျင်နရေတာ စက်ရုံမှ စျေးနှုန်း သက်သာသော်လည်း အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှာ အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ပါသည်။ခေတ်မီထုတ်လုပ်သည့်စနစ်ဖြင့် တရုတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာစက်ရုံ။စျေးရောင်းသူများသည်ယခုကိုးကားရန်အွန်လိုင်းတွင်ရှိသည်။
Wထုတ်ကုန်များ၏ အိုင်ဒီယာအကွာအဝေးနှင့် ခိုင်မာသော လိုက်လျောညီထွေရှိမှု။၎င်းသည် အလတ်စားနှင့် အကြီးစား ထရပ်ကားများ၊ အပေါ့စား ထရပ်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး စက်ယန္တရားများနှင့် အခြား ၀ယ်လိုအားရှိသော နေရာများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပိုမိုထူးခြားသော ပါဝါထုတ်ကုန်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။Deutz အင်ဂျင်များကို လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဖော့ထရပ်ကားများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကွန်ပရက်ဆာများ အပါအဝင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။Deutz မီးစက်အစုံ၊ အမှတ်တံဆိပ်ကြီး၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာမခံ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
Deutz Generator သတ်မှတ်ထုတ်ကုန် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
1. Deutz အင်ဂျင်၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော သက်တမ်း။
2. Deutz ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံ၏ ထုတ်လွှတ်မှုသည် Euro II သို့မဟုတ် Euro III စံနှုန်းသို့ ရောက်ရှိသည်။
3. အမြင့်ပေနှင့် မြင့်သောဒေသများသို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော လေဝင်ပေါက်နှင့် ပြန်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော စူပါအားသွင်းအမျိုးအစားအသစ်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
4. Deutz သည် ထုတ်ကုန် အစုံအလင်အတွက် အရည်အသွေး အာမခံချက် ပေးသည်။
5. Deutz ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား 24 နာရီ အရောင်းအပြီး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်ပါသည်။
Deutz Generator Sets--Beidou ထုတ်ကုန်များ၏ အားသာချက်များ
1. ထုတ်ကုန်တွင် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောဘဝနှင့် ချွေတာသုံးစွဲမှုတို့ပါရှိသည်။
2. ကျယ်ပြန့်သောပါဝါအကွာအဝေး၊ ပါဝါအကွာအဝေး 18 KW-660 KW၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သော၊ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သော၊ အမျိုးမျိုးသောအကြီးစားစက်မှုစွမ်းအင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်။
3. ဂျင်နရေတာ အစုံလိုက်ထုတ်ကုန်များသည် အဆင့်မြင့်၊ ထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးတို့တွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။
4. လေဝင်ပေါက်နှင့် ပြန်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကုန်းပြင်မြင့်နှင့် မြင့်သောဒေသများသို့ ကောင်းစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
5. Deutz မီးစက်အစုံများသည် Deutz ကုမ္ပဏီမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် အလားတူထုတ်ကုန်များကြားတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေးကောင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သုံးစွဲသူများအကြား အလွန်ရေပန်းစားပါသည်။
Beidou Duetz အင်ဂျင်ပါဝါသုံး ဂျင်နရေတာသည် 18-250KW 20KVA - 450KVA လျှပ်စစ်၊ ကြိမ်နှုန်း 50Hz သို့မဟုတ် 60Hz၊ အမြန်နှုန်း 1500 rpm သို့မဟုတ် 1800 rpm မှ ပါဝါထောက်ပံ့ပါသည်။အသုံးပြုသည့်နေရာများနှင့် ကိုက်ညီရန် Single အဆင့် သို့မဟုတ် သုံးဆင့်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Generator မော်ဒယ် ဆက်တိုက်ပါဝါ အသင့်အနေအထားပါဝါ အင်ဂျင်မော်ဒယ်
BD-D18 18KW/22.5KVA 20KW/25 KVA BFM3G1
BD-D24 24KW/30KVA 26.5KW/33KVA BFM3G2
BD-D35 35KW/44KVA 38.5KW/48KVA BFM3T
BD-D40 40KW/50KVA 44KW/55KVA BFM3C
BD-D50 50KW/62.5KVA 55KW/68.8KVA BF4M2012
BD-D60 60KW/75KVA 66KW/82.5KVA BF4M2012CG1
BD-D75 75KW/94KVA 82.5KW/103KVA BF4M2012CG2
BD-D80 80KW/100KVA 88KW/110KVA BF4M1013ECG1
BD-D95 95KW/120KVA 105KW/132KVA BF4M1013ECG2
BD-D110 110KW/137.5KVA 121KW/151KVA BF4M1013FC
BD-D125 125KW/156KVA 137.5KW/172KVA BF6M1013ECG1
BD-D140 140KW/175KVA 157KW/193KVA BF6M1013ECG2
BD-D150 150KW/187.5KVA 165KW/206KVA BF6M1013FCG2
BD-D165 165KW/206KVA 182KW/227KVA BF6M1013FCG3
BD-D210 210KW/263KVA 231KW/289KVA TCD8.0
ဒီဇယ်မီးစက် လောင်စာဆီချွေတာရေး အကြံပြုချက်များ
1. ဒီဇယ်ကို သန့်စင်ပါ။ဒီဇယ်တွင် သတ္တုဓာတ်နှင့် အညစ်အကြေး အမျိုးမျိုး ပါရှိသည်။စစ်ထုတ်ပြီး မသန့်စင်ပါက၊ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ၏ ပါဝါသည် လျော့နည်းလာပြီး လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
2. ကာဗွန်အနည်များကို ဖယ်ရှားပါ။ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သည့် ကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုအတွင်း၊ အဆို့ရှင်၊ လောင်စာထိုးသည့် နော်ဇယ်နှင့် ပစ္စတင်ထိပ်တွင် ပါ၀င်သော ပိုလီမာများ ရှိသည်။ဤကာဗွန်အနည်အနှစ်များသည် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး အချိန်မီ ဖယ်ရှားသင့်သည်။
3. အလုပ်ကို အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနဲ့။ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ အစုံသည် ဝန်ပိုနေချိန်တွင် မီးခိုးမည်းများ ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ လောင်စာဆီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝ မလောင်ကျွမ်းစေဘဲ လောင်စာသုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုစေမည်ဖြစ်သည်။
4. သင့်လျော်သော coolant အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
5. ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အချိန်မီပြုပြင်ခြင်း။ကုသခြင်းထက် အာဟာရက ပိုအရေးကြီးပြီး ကာကွယ်ခြင်းသည် ပြုပြင်ခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးသည် ဟူသော အယူအဆကို အခိုင်အမာ ချမှတ်ပါ။
ယခင်- 100KW ဒီဇယ်မီးစက်
နောက်တစ်ခု: 200KW ဒီဇယ်မီးစက်
၂၅ ဧပြီ၊ ၂၂